Boqorka Spain oo ka digay gooni isutaagga Catalonia - BBC News Somali
Boqorka Spain oo ka digay gooni isutaagga Catalonia
Image caption Boqor Felipe ayaan waxba ka badalin meeshii uu ka taagnaa midnimada
Boqorka Spain ayaa markale ku baaqay midnimada dalkiisa, xilli ay sii xoogeysanayso xiisadda ka dhalatay madax bannaanidii uu ku dhawaaqay gobolka Catalonia.
Boqor Felipe VI oo khudbadiisa ciidda Masiixiyiinta jeedinayay ayaa ugu baaqay shacabka Catalonia inay doortaan wadajirka, oo aysan ka shaqeyn isku dhac.
Si toos ah uma uusan magacaabin hogaamiyayaasha gooni u goosadka ah ee gobolkaasi.
Aftidii Catalonia ka dhacday bishii Oktoobar, ayaa boqorka waxa uu aad u dhaliilay dadkii u ol'oleynayay madax bannaanida gobolkaasi.
Qaar ka mid ah shacabka Catalonia ayaa ka carooday in boqorka aanu soo hadal qaadin tacaddiyadii ay booliska Spain ka geysteen gobolkaasi intii ay socotay aftida.
Felipe VI ayaa sheegay in xildhibaannada maalmo ka hor loo doortay baarlamaanka Catalonia, ay tahay inay wax ka qabtaan dhibaatooyinka haysta dhammaan shacabka gobolkaasi, ayagoona maanka ku haya danta guud.
Taliyaha booliska Catalonia oo "fallaaganimo" lagu eedeeyay
Rai'sul wasaaraha Spain oo kala diray baarlamaankii Catalonia
Midowga Yurub oo sheegay in aysan faragalin doonin muranka Catalonia
Kooxda FC Barcelona xagay raaci hadii Catalonia go'do?
Image caption Carles Puigdemont ayaa ku baaqay wadohadal
"Ma aha in dhabaha uu nagu hogaamiyo iska horimaad iyo kala qeybsanaan, kuwaasoo aan ognahay inay dhaliyeen khilaaf, hubaal la'aan iyo walaac," ayuu yiri boqorka oo khudbada ka jeediyay qasriga uu ku leeyahaya caasimadda Madrid.
Hogaamiyaha gooni u goosadka ah, Carles Puigdemont, oo isbahaysigiisa uu ku guulaystay inta badan kuraasta baarlamaanka Catalonia, ayaa weli ku sugan caasimadda Brussels ee dalka Belgium, waxaana uu ugu baaqay ra'iisal wasaaraha Spain, Mariano Rajoy inay kulmaan oo ay ka wadahadlaan xiisadda gobolkaasi.
Dadka Catalonia ee Spain maxay tirsanayaan